Nhoroondo Kambani-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Imba>Nezve SHL>Company Profile
Suzhou Sohologistics CO., LTD (inozonzi Sohologistics kana SHL), inzvimbo yakazara yekambani yepamusha neyekunze yezvigadzirwa zvemabasa, inokwenenzverwa neClass-A Nyika / Yepamberi yekutakura zvinhu inobvumidzwa nebazi rezveMabhizimusi uye yakanyoreswa ne iyo State Administration yeindasitiri uye Commerce uye Ministry of Transport.
Kubatisisa pfungwa yebasa re "Famba Sekuda, Svika Pakutumwa", kutora nzira dzehutungamiriri dze "Kugadziridza nekuvandudza, Kusiyana uye Kunatsiridza, Sohologistics inoita kuyedza uye kurwira kuve nyika inozivikanwa inozivikanwa kambani yezvigadzirwa nesainzi uye tekinoroji kugona kugona uye ichi zvakare Chiono cheSohologistics.
Nekuvandudzwa kwesimba kweE-commerce uye nekuremekedza zvakanyanya pfungwa yehukama hwemagariro Sustainable budiriro, Sohologistics inotenda kuti indasitiri yezvigadzirwa ichasangana neshanduko shanduko saka inotanga kutsvaga mikana mitsva yekuvandudza. Iyo yechinyakare nzira yekutakura cheni manejimendi inodzoserwa uye yazvino cheni yekushandisa manejimendi yakabatana ne e-commerce chikuva ichave ichiwedzera uye ichiwanzoitika saka zvachose ichave yakananga, yakapusa uye inoshanda, inoenderana nemhinduro yezvakatipoteredza zvine hushamwari, kuchengetedza simba uye kudzikisira kubuda.
Iyo shanduko inosimbiswa nekufambiswa kweInternet uye tekinoroji dhatabhesi, saka SHL inodzokera kune yakakosha pfungwa ye "inotungamirwa nevanhu", ndiko kuti titarise pane ruzivo rwevatengi (senge kuti vatengi vanogona sei kutenga nekutengesa zvinhu chero nguva uye chero kupi , nzira yekuwana ruzivo rwekugadzira cheni uye nezvimwewo) uye nekupa mhinduro yakazara yeanoshanda cheni yekushandisa, inova pfungwa yakakosha ipfungwa yeakakosha-akawedzera masevhisi. Sohologistics haingodi chete kupa iyo yechinyakare yekuchengetedza uye yekufambisa masevhisi, asi zvakare inopa yakawedzera yakawanda yakasanganiswa logistics masevhisi sekushandisa zvizere ruzivo ruzivo senge isina musono yakabatana nevatengi 'ERP masystem, logistics system inosangana ne-on-line uye off-mutsara kutenga nekutengesa, Zvakare, SHL ine nhevedzano yemasevhisi anoenderana ezvemari uye mamwe masevhisi-anowedzera.
Sohologistics inotarisira kuve imba ine hushamwari yevatengi yekupa yakakwana svutugadzike manejimendi manejimendi mhinduro, iine makore ayo ezviitiko mune yechinyakare logistics indasitiri, hunyanzvi hwakabatanidzwa logistics manejimendi ruzivo ruzivo uye kuenderera mazano matsva. SHL zvakare inopa mhinduro dzinoenderana neyechina bato zvigadzirwa zveSMEs (Makambani madiki nepakati-epakati) emakambani ekutengesa epamba uye ekunze.
Sohologistics, senhengo yeCATA neNVOCC, WCA, WIFFA, XLP, inogadzira hukama hwenguva refu hwekudyidzana nemakambani mazhinji enhandare dzendege, vanoputsa varidzi vengarava, RORO, makambani ekutakura makombi uye vazhinji vekunze vanokwanisa agency.
Kunze kweiyo general cargo, SHL inogona kupa CY kumusuwo one-stop projekiti logistics mhinduro dzekuwedzeredza, kuwanda uye kuwanda kwezvinhu, zvinorema uye zvakakurisa cargos, EPC engineering projekiti logistics, chirongwa logistics.
Sohologistics inotarisa pane kuiswa kwekufambisa mhinduro kune yakasarudzika-yakagadzirirwa dhizaini uye kugadzirisa. Chokwadi, makambani mazhinji ekufambisa nhumbi anogona kupa vatengi akasiyana siyana masevhisi ekufambisa, asi SHL iri kunyanya kunetseka nezve dhizaini uye kusangana kweakasiyana ezvekufambisa masevhisi. Yakanakisa chirongwa chekufambisa chinouya kubva mukubatanidzwa uye kuenzanisa kwenzira dzakawanda dzekutakura, iyo yakagadzirirwa dhizaini. yenzira dzinoverengeka dzekutakura, musanganiswa wekunze uye kutumira kunze hunyanzvi hunyanzvi uye ruzivo rwe "nguva yekusvika yekusvika" kuti uwane zvakavimbika uye zvehupfumi hurongwa hwekufambisa.
Sohologistics iri kuda kuenda kunze kwenyika kunogadzirisa zvinhu, kuunganidza mutero wekubhadhara uye kuita zvibvumirano zvekufamba-famba nemikova mhiri kwemakungwa kune akawanda uye akawanda maChinese emuno makambani ekufambisa nhumbi uye kuwana zvakawanda zvakabatanidzwa muhupamhi hwakawanda hwekutengeserana kwenyika dzekutakura.